Uphinde wasala encela izithupha umqeqeshi weLeopards ezakhe ziphinda ziphucwa iqatha emlonyeni - Impempe
Uphinde wasala encela izithupha umqeqeshi weLeopards ezakhe ziphinda ziphucwa iqatha emlonyeni
Usale ekhala ezithulisa umqeqeshi weBlack Leopards, uDylan Kerr ngemuva kokuthi leli qembu liphinde lahluleka ukuzibamba ziqine lize liwine ngemuva kokuthi lihambe phambili emdlalweni walo nomkhaya baseVenda iTshakhuma Tsha Madzivhandila ngoLwesithathu ntambama.
ILidoda Duvha izihole phambili ngemuva kokuthola iphenathi evalelwe phakathi nguRoderick Kabwe, kodwa ngesiwombe sesibili yayeka iTshakhuma ukuba ibuye.
Elokulinganisa leTshakhuma libaselwe enethini nguRhulani Manzini kade kuyi-free kick.
“Kuphinde kwaba ngumdlalo esidlale kahle ngesiwombe sokuqala, sabhacaza kwesesibili. Yinto esiphindayo leyo, kwenzekile nakoweKaizer Chiefs (ngesonto eledlule). Into eyodwa, futhi isiqala ukukhakhathaza emoyeni,” kuchaza uKerr.
“Sidlale kahle ngesiwombe sokuqala siphaselana kahle, kube yinto ecishe ifane nangesiwombe sesibili. Besazi ukuthi bazobuya bengasagayelwe mphako ngenxa yokuthi bese sinegoli bengenalo bona. Bekumele sigweme ukulahla ibhola nokubanika ama-free kick mama corner kick ngoba besazi yiyona ndlela abazolithola ngayo leyo igoli.
“Sibaphile i-free kick nebala bayisebenzisa, kodwa bengibabonisile abadlali bami ukuthi bayishaya kanjani. Uma ikuleya ndawo ikhahlelwa wuManzini futhi wayishaya ngendlela efanayo nakuMaZulu. Ubengeke ke ajike indlela eyamsebenzela. Ngicabanga ukuthi besingenza kangcono kakhulu,” kusho uKerr.
Uzakwabo kuTshakhuma, uJoel Masutha yena akakhalanga kakhulu, ethi ukuthi iqembu ngalinye lithole iphuzu elilodwa wumphumela obe nobulungiswa.
“Njengoba besilindele, umdlalo bewunzima. Bezidlana imilala ngesiwombe sokuqala kodwa womabili amaqembu abesasabana. Bebethembele ezinkakheni zabo ezinamava phambili oRamaG (Rodney Ramagalela) no-Ovidy (Karuru) obegcwele ukuzethemba ngemuva kokushaya amagoli amabili bebhekene neChiefs.
“Ebesingafuni kwenzeke wukuthi singenelwe yigoli ngesiwombe sokuqala ngoba sekuyinto esijwayele kodwa kwenzekile.
“Esiwombeni sesibili bese sibaxakile futhi besazi sizobalimaza uma sike sathola i-free kick. Asizange sipheze ukuzama futhi ngicabanga ukuthi umphumela ube ngofanele kuwo womabili lamaqembu,” kuphetha uMasutha.
Previous Previous post: Akabukeki ekhathazekile umqeqeshi wePirates ngokuhluleka kwezakhe ukubhubhudla iChippa seziyibanjelwe
Next Next post: Ezibuhlungu kubashayisibhakela kumiswa izimpi ebezibhekwe ngabomvu